Mustaf Dhuxulow oo ka dhoofay Muqdisho iyo amarkii xeer ilaaliyaha oo socon waayay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 7 December 2014
Mareeg.com-Siihayaha Wasiirka Warfaafinta Dowlada Federalka Soomaaliya Mustaf Dhuxulow ayaa maanta ka dhoofay garoonka dayuuradaha ee magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda dalka Isutagga Imaaraadka Carabta xilli ay xeer ilaaliyaha qaranka iyo Hantidhowrka guud ay soo saareen wareegto mamnuucaysa in wasiirada dowladii kalsonida weysay aysan dalka ka bixi karin amar la’aan.
Mustaf Dhuxulow ayaa ka dhoofida uu maanta ka dhoofay magaalada Muqdisho la sheegay in ay tahay arrimo gaar ah iyadoo weliba aysan ka soo wareegin muddo 24 saacadood ah waqtigii dowlada uu ra’iisal wasaaraha ka ahaa Cabdiweli Sheekh Axmed ay kalsoonida weysay.
Siihayaha wasiirka warfaafinta Mustaf Dhuxulow ayaa ka mid ahaa wasiiradii sida cad u taageerayay ra’iisalwasaare Cabdiweli Sheekh waqtigii uu socday khilaafkii u dhexeeyay madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’iisal wasaare Cabdiweli Sheekh.
Wareegto ay si wadajir ah u soo saareen xeer ilaaliyaha qaranka iyo hantidhowrka qaranka ayaa u muuqata mid aan dhaqan gelin maadaama mid kamid ah sii hayaasha wasaaradaha uu ka dhoofay maanta magaalada Muqdisho.
Wasiiro hore ugaga mid ahaa dowladihii hore u soo maray dalka ee la bedelay ayaa weli haysta sida la sheegay hanti kala duwan oo ay ka mid yihiin gawaarida aan rasaasta karin ee la siiyo madaxda sarsare.
Ma jirto illaa haatan wax war ah oo ka soo baxay xafiisyada xeer ilaalinta iyo hanti dhowrka qaranka ee la xiriirta dhoofista uu Mustaf Dhuxulow ka dhoofay dalka.
Midowga Afrika oo ku qanacsan qaabkii lagu soo afjaray khilaafka madaxda Soomaaliya